ụlọ ahịa akwa - Etagtron, Inc.
Akụkọ banyere mmepe
Kpido & Label
Igbe dị nchebe
ụlọ ahịa akwa
Ngwọta maka Storelọ Ahịa Akwa
A na-etinye ọnụ ụzọ ámá n'ọnụ ụzọ ụlọ ahịa ahụ, a na-ekpebi ọnụ ụzọ ámá site na obosara ọnụ ụzọ na ụdị ọnụ ụzọ ámá ahụ.
Kedu akara ma ọ bụ akara a ga-eji gị?
Mkpado nche n'ihi Uwe:
N'oge ọkọchị uwe, ọkụ Ngwa dị ka uwe, skirts, play-suit, T-shirt, Etagtron na-enye mkpado nche na obere pin 16mm ma ọ bụ ahaziri maka ichebe ha. Karịsịa maka akwa silk, na-eji mkpado Etagtron na lanyard site na bọtịnụ ahụ, nke ka mma iji gbochie mmebi.
Ndụmọdụ: Tinye ntụtụ ahụ site na uwe wee jiri nwayọ tinye na mkpado. Etinyela nsị n'ime mkpado.
Oge oyi uwe, Etagtron nwekwara ike inye mkpado nche na ogologo pin ma ọ bụ ahaziri lanyard ahaziri ichebe Down.
Mkpado nche maka Akpụkpọ ụkwụ:
Etagtron na-enye ọtụtụ ụdị mkpado iji chekwaa akpụkpọ ụkwụ dị iche iche.
Mkpado nche n'ihi na akpa na akpa:
Akpa na Luaages bụ nke bara uru dị oke ọnụ ahịa, na-ejikarị mkpado mkpu onwe iji mata mmetụta nchebe ka mma. Etagtron na-enye ọtụtụ ụdị nlezianya mkpuchi onwe gị dị egwu iji kwekọọ na akpa ma kwalite akara ngosi gị.
Mkpado nche maka ejiji Ngwa:
Olee otú iji wepụ na mkpado?
Mgbe akwụchara gị ụgwọ, ịnwere ike iwepu nchekwa ndị a site na isiokwu na onye edemede ma ọ bụ deactivator anyị.
A na-ekpebi ọnye nkwụsị ma ọ bụ deactivator site na nnukwu oche.
Jiri magnetic detacher wepu mkpado nke magnetik mkpọchi.Fro magnetik mkpọchi, e nwere ihe abụọ dị iche iche nke mkpọchi: ọkọlọtọ mkpọchi na ibu mkpọchi, maka ọkọlọtọ mkpọchi, ị nwere ike iji detacher na magnetik ike 8000gs wepụ ya, n'ihi na ibu mkpọchi, ị chọrọ iji detacher na magnetik ike 16000gs.
Adress:RM101, Yuzhou okike ogige, No.3409 Jinghong Road, Minhang District, Shanghai (201108)
Ekwentị:0086 21 64953088-826
Copyright - 2010-2021 Etagtron, Inc.: Ikike niile echekwabara.